रेलमार्ग यातायात तिब्बत र भित्री भूमिबीचको पारस्परिक सम्पर्क पुल_china.com
रेलमार्ग यातायात तिब्बत र भित्री भूमिबीचको पारस्परिक सम्पर्क पुल
2015-01-13 10:16:37 CRI
गत वर्ष तिब्बतको रेलमार्ग निर्माणले तीब्रता लिएको छ। गत अगष्ट महिनामा ल्हासा-सिगाचे रेलमार्ग संचालन भएपछि ल्हासा-लिन च् रेलमार्गको निर्माण शुरु हुन लागेको छ। तिब्बतका रेलमार्गहरुको निर्माण पूरा भएपछि सर्वसाधारणले रेल चढेर हिउँदे पठारभूमि घुम्नसक्ने छन्। साथै हिउँदे पठारभूमिमा बसोबास गरिरहेका तिब्बती वासिन्दाहरु रेलद्वारा भित्री भूमिको विभिन्न शहर पुग्नसक्ने छन्। रेलमार्ग यातायातले तिब्बतको पर्यटन व्यवसायको विकासलाई बढाएको मात्र नभई भित्री भूमि र तिब्बतका वासिन्दाहरुका लागि पारस्परिक रुपमा सम्पर्क गर्ने पुलको निर्माण गरेको छ।
यो ल्हासा-सिगाचे रेलमार्ग संचालन भएपछि सिगाचे शहरको पर्यटन व्यूरोले मुख्यतःप्रस्तुत गरेको गीत हो। यो गीत स्थानीय पर्यटनको प्रचार-प्रसार गीत हो। तपाईं पहिलो पटक तिब्बत जानुहुने र अनि रेल चढेर ल्हासाबाट सिगाचेतर्फ जानुभएमा बाटोको दृश्यले तपाईंलाई अचम्मको अनुभव दिने छ।
“यहाँको वातावरण सफा छ। आकाश पनि सफा छ। यहाँ निकै अग्ला पहाडहरु छन्।”
अझै बढी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने वाहेक, एक रेलमार्गले समेटेका के के अचम्मका भूमिका छन् त? सिगाचे शहरको पर्यटन व्यूरोका प्रमुख भु पु चा सी स्थानीय पर्यटन व्यवसायको विकासप्रति आशावादी हुनुहुन्छ।
“ल्हासा-सिगाचे रेलमार्ग अगष्ट महिनामा संचालन भएपछि सोही महिनाको पर्यटकको संख्यामा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 43प्रतिशतले बृद्धि भएको छ। सेप्टेम्बर महिनामा पर्यटकहरुको संख्यामा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 52प्रतिशतले बृद्धि भएको छ। हामीले सिगाचेलाई तिब्बतको दोस्रो ठूलो पर्यटन वितरण केन्द्र खडा गर्ने योजना बनाएका छौं।”
स्थानीय पर्यटन व्यवसायको विकास तिब्बतका वासिन्दा धनी बनाउनका लागि के के अर्थ रहने कुराबारे चर्चा गर्दा भु पु चा सीले भन्नुभयो, पर्यटन व्यवसायको फराकिलो श्रृंखला छ, एक सय दश वटा व्यवसायसित सम्बन्धित क्षेत्र छन्। हस्तकला, पर्यटनको स्वागत, ढुवानी, रेस्टुराँ, पर्यटनका लागि स्मृति चिनोआदि। तिब्बतले पर्यटन व्यवसायलाई शक्तिशाली व्यवसायको रुपमा बनाउने हो भने स्थानीय वासिन्दा धनी हुनेछन्। यसका साथै पर्यटकहरु तिब्बत आउँछन्, तिब्बतको विशेषतायुक्त वस्तु हे‍र्न मन पराउँछन्। तिब्बतका वासिन्दाले विशेषतायुक्त वस्तु देखाउने र उत्पादन गर्ने हो भने तिब्बतको सँस्कृति पनि अझै राम्रोसँग संरक्षण, निरन्तरता र प्रचार-प्रसार हुँदै जानेछ।
चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार समितिको अनुमोदनअनुसार, ल्हासा-लिन च् रेलमार्गको निर्माण शुरु हुन लागेको छ। ल्हासा-लिन च् रेलमार्ग निर्मित भएपछि ल्हासा-सिगाचे रेलमार्गसँगसँगै छिङहाई-तिब्बत रेलमार्गका दुई वटा पखेटा बन्ने छन्। यी दुबै रेलमार्गले तिब्बतको यातायात अवस्थाको सुधार गर्ने छन्। साथै भित्री भूमिका पर्यटकहरुलाई तिब्बत घुम्न जान अझै सुविधा हुने छ। ल्हासा-लिन च रेलमार्गको संचालनले हिउँदे पठारभूमिका वासिन्दाहरुलाई के के परिवर्तन ल्याउने छ? सिगाचे शहरको ने ला मू जिल्लाको लि सिन गाउँका वासिन्दा भुर्बाले भनेका छन्
“हामीसँग धेरै सुन्दर आशाहरु पलाएका छन्। हाम्रो गाउँका सबै वासिन्दाहरुलाई क्रमशःधनी बनाउने हाम्रो इच्छा छ।”